Kooxda Sohdo oo 1-0 uga badisay koox ka socotay Degmada Galdogob. Sawirro | Radio Muqdisho
Kooxda Sohdo oo 1-0 uga badisay koox ka socotay Degmada Galdogob. Sawirro
Published on February 2, 2013 by admin · 1 Comment · 2,452 views
Kooxda Kubadda Cagta Sohdo oo ka mid ah kooxaha heerka 1aad ee Maglaada Gaalkacyo ayaa Ciyaar saaxiibtinimo oo ka dhacday Garoonka C/llaahi Ciise ee Magalaada Gaalkacyo waxa ay 1-0 uga badisay koox matalaysay dagmada Goldogob.
Ciyaarta oo daawashadeeda ay ka qaybgaleen Masuuliyiin uu ka mid yahay Wasiirka Ciyaaraha Galmudug Saadaq Daahir Mire, Wasiirro ka tirsan Maamulka Galmudug, Saraakiisha Ciidamada Galmudug, Marti sharaf, Qurbajoog Aqoonyahano iyo dad aad u badan ayaa ku bilaabatay weerar iyo weerar celis ay sameynayeen labada kooxood,waxaana lagu kala nastay qaybtii hore ee Ciyaarta 0-0.
Markii la isku soo laabtay Qaybtii dambe ee Ciyaarta ayaa waxaa Ciyaar Weerar ku dhisan la soo baxday Kooxda Sohdo oo culays weyn saartay goosha kooxda Galdogob maadaama iyada marti loogu ahaa gurigooda waxaana u suuragashay inay helaan Goolkii ay mudaba raadinayeen Kooxda Sohdo waxaana u saxiixay Ciyaaryahanka Weerarka uga ciyaara Kooxdaas Maxamed Nuur.
Kooxda Degmada Galdogob ee Gobalka Mudug ayaa muujisay Dadaal weyn waxayna intii cayaartu socatay ay badal ku sameysay qaar kamid ah Ciyaartoydii ay markii hore garoonka la soo gashay maadaama ay ku dadaaleysay in ay iska soo gudo goolka lagu lahaa balse uma suuragalin inay helaan Goolka bar baraha ah ama ay dhaliyaankan lagu lahaa wax ka badan waxayna ciyaartu ku soo idlaatay 1-0 oo ay guushu ku raacday Kooxda Sohdo.
Sikastaba ha ahaatee Guushan ay kooxda Sohdo ka gaartay Kooxda matalaysay Degmada Galdogob ayaa waxa ay qayb ka tahay Guulo xiriir ah oo ay kooxdan gaartay Mudooyinkii la soo dhaafay iyadoo dhinaceeda dhulka la dhigay labo jeer oo kaliya 2dii sano ee la soo dhaafay sida uu warbaahinta Qaranka xafiiskeeda Gaalkacyo u sheegay tababaraha kooxda Sohda Burhaan C/laahi Xaashi.
cali diiriye says:	February 3, 2013 at 1:53 pm	Waxaa farxad weyn ii ah inaan arko kooxda aan sida weyn u jeclahay ee sohdo guul wacan sohdo football club